बालअधिकार अभियानमा सिविस
PublicationsAnnual ReportsReportsMedia Monitoring ReportChild Rights in NepalBlogContactGet Involved	बालअधिकार अभियानमा सिविस नेपालमा सन् १९९१ पछि देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि मात्र देशमा संघ संस्था खोल्ने र बालअधिकार, महिला अधिकार र समग्रमा नागरिक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । त्यसैबेला नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर भयो र देशमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न थुप्रै संघ संस्था पनि स्थापना भए । यसै क्रममा सन् १९९३ मा हामी केही महिलाहरू मिलेर मानव अधिकार र सामाजिक सेवामा महिला र बालबालिका (सिविस) संस्था दर्ता गरेर नेपालका बालबालिका र महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने निश्चय ग¥यौं । सिविस स्थापनाका प्रारम्भिक दिनमा नेपालमा धेरै पछाडि परेका आदिवासी जनजाति थारू महिलाहरूलाई औपचारिक शिक्षा कानुनी सचेतना र आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भनेर नवलपरासीका विभिन्न गाउँ विकास समितिमा कार्यक्रम थालनी गरिएको थियो । काम गर्दै जाँदा त्यहाँका महिलाहरूको अर्को ठूलो पीडा पनि उजागर भयो त्यो थियो उनीहरूका थुप्रै बालबालिका पढ्ने अवसरको खोजीमा र आर्थिक समस्या टार्न भनी सहरतिर आएका र पठाइएका रहेछन् । लामो समयदेखि भेटघाट र सम्पर्कमा नरहेका आफ्ना बालबालिका कस्तो हालमा छन् ? के गर्छन् ? कहाँ छन् ? भन्ने कुरा थाहा नपाएका आमाहरूको दुःखेसोपछि हामीले सन् १९९६ देखि थप अर्को अभियान सुरु ग¥यौं । त्यो थियो बालअधिकारको पक्षमा जनवकालती अभियान । हाम्रो अभियान अन्तर्गत पहिले कामको खोजीका लागि सहरतिर आएका वा पठाइएका बालबालिकाको खोजी गर्ने र तिनीहरूको हकहितमा काम गर्ने निधो ग¥यौं । हामीले हाम्रो कामको केन्द्रविन्दु बालश्रममध्ये पनि त्यसबेला सबैको ओझेलमा परेको घरेलु बालश्रमलाई बनायौं । देशमा सरकारले सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा हस्ताक्षर गरेर बालसंरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता त जनायो तर प्रतिबद्धता अनुसार कानुन बन्ने तथा सरकारी योजनाहरू सुरसार थिएन । समाजमा बालबालिकालाई काम लगाएर आफू मालिक बन्नु भनेको प्रतिष्ठाको विषय थियो । आफूलाई दुई छाक खान पुग्ने, सानो जागिर र सानो व्यवसाय हुनेदेखि लिएर आफूलाई सम्भ्रान्त भन्नेहरू सबै बालबालिका काम गर्न घरमा राख्ने प्रचलनकै रूपमा थियो । यसरी बालबालिकाको शोषण गर्नु अन्याय हो । कानुन विपरीत कार्य हो भन्न सक्ने हाम्रो स्थिति थिएन । त्यसबेला हामी सम्झाई बुझाई गरेर जोखिममा परेका केही बालबालिकाको उद्धार गर्ने, तिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने र उनीहरूमाथि भएको ज्यादती बारेमा मात्र बोल्न सक्ने स्थितिमा मात्र थियौं । किनभने त्यसबेलासम्म न कानुन नै निर्माण भइसकेको थियो नत आम नागरिकमा बालबालिकामाथि हुने शोषणविरुद्ध चेतना नै फैलिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रले हस्ताक्षर पश्चात् आफ्नो देशमा महासन्धि कार्यान्वन हुन थालेपछिको प्रगति विवरण निर्धारित समयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । यो दायित्व पूरा गर्नका लागि पनि सरकारी निकायहरूको अगाडि बालबालिकाको हकहितको सन्दर्भमा केही कानुन तथा नयाँ योजनाको निर्माण गर्नै पर्ने स्थिति सिर्जना भयो । परिणामस्वरूप सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गरेका प्रयासहरूबाट बालअधिकारको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्दै गयो । हामी जस्ता संघ संस्थालाई काम गर्न पनि सहजता हँुदै गयो । बालबालिकाको स्थितिमा सुधार आउँदै गयो । यसै क्रममा २०४८ सालमा नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माण भयो र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको स्थापना समेत भएपछि नेपालमा १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु नहुने कानुन पारित भयो । त्यसपछि भने हामीले त्यसै कानुनमा टेकेर अलि खुलेर बालअधिकारका बारेमा वकालत गर्ने वातावरण बन्यो तर त्यो कानुन लागू गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट तदारुकता देखाइएको थिएन । अनुगमन पटक्कै थिएन । आम नागरिकमा सचेतना थिएन भने सरकारी निकायमा बस्ने कर्मचारी समेत यस विषयमा सचेत र संवेदनशील थिएनन् । त्यसबेलासम्म पनि नेपालमा बालश्रम कहाँ–कहाँ कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ ? ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ? देशमा कति बालबालिका आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् ? भन्ने कुरा सरकारको चासोको विषय बन्न सकेको थिएन । पछि नेपालमा बनेका गलँैचाहरूमा बालश्रम प्रयोग भएका विषयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हल्लीखल्ली भएपछि त्यस्ता कारखानामा बालबालिकालाई काममा लगाएको बारे सरकारी स्तरबाट अनुगमन सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय संस्थाहरूले यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र उनीहरूका हकहितका विषयमा कार्यक्रमहरू गर्न थालेपछि सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाउन थाल्यो । यसै क्रममा सिविसले सन् २००२ मा स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा घरेलु बालश्रमिकसँग काम गर्न सुरुवात गरेको हो । सिविसले घरेलु बालश्रमिकहरूको पक्षमा सञ्चालन गरेको जनवकालती अभियानपछि हेटौंडा नगरपालिकाले आफ्नो नगरमा भएका यस्ता बालश्रमिकहरूको हकहितमा काम गर्ने चासो दिंदै बजेटसमेत छुट्याएको थियो । यसैगरी काठमाण्डौ वडा नं. ७ ले आफ्नो वडाभित्र रहेका घरेलु श्रमिकको विवरण राख्ने र परिचयपत्र दिनेसम्मको काम भयो तर यो कामले पछिसम्म निरन्तरता पाउन भने सकेन । जेहोस तबसम्म सरकारी निकायहरूमा पनि केही सकारात्मक सोचको विकास भइसकेको थियो । २००६–२००७ सम्म आइपुग्दा आम नागरिकमा धेरै सचेतना अभिवृद्धि भएको थियो । देशका कुना कुनाबाट प्राथमिक विद्यालयहरू स्थापना भएकाले उतै पढ्ने अवसर प्राप्त हुन थालेपछि बालबालिका कामका लागि सहरमा भौंतारिने क्रममा पनि केही कमी आइसकेको थियो । यसपछि सिविसले घरेलु श्रमिक बालबालिकाको शिक्षामाथिको पहुँच पु¥याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ९ महिने अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन ग¥यो । यसरी सिविसले एउटा ठाउँमा कक्षा सञ्चालन गर्दा हरेक ९ महिने कक्षा सकिन्थ्यो । पुराना विद्यार्र्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन्थे तर त्यसै ठाउँमा फेरि नयाँ विद्यार्थीहरू त्यतिकै आउँथे । यसको अर्थ घरेलुश्रममा बालबालिका आउने क्रममा केही कमी आयो तर पूर्णविराम भने लागेको थिएन । यसरी बालबालिका श्रमका लागि सहरतिर आउने क्रम हालसम्म पनि जारी रहेकै छ । तर पनि समयले केही कोल्टो फेरेको छ । एक समय बालबालिकालाई नोकरको रूपमा राख्नु गौरव र प्रतिष्ठाको विषय थियो भने अब यो प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय बन्न पुगेको छ । त्यसबेला बालश्रमिकहरूलाई खुलेआम यातना दिने गरिन्थ्यो भने अब लुकीछपी मात्र गर्न थालिएको छ । यातनाको विषय अब कानुनको दायरामा आउन सक्ने भएकोले यसमा पनि धेरै कमी आएको छ । यसरी बालश्रम शोषणमा र बालअधिकार स्थापनामा पाइला फुकी फुकी परिवर्तन हुँदै आएको छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हाम्रो देशले हस्ताक्षर गरे पश्चात् बालश्रमविरुद्ध सकारात्मक वातावरण बन्दै गएकोले यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाको केही समयपछिदेखि भएको राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र संघर्ष र नयाँ संविधान निर्माणमा लागेको समयका कारणले पनि देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । यस स्थितिमा बालअधिकारका सवालहरू पनि स्वतः ओझेलमा परेका छन् । फलस्वरूप आज पनि धेरै बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन् । घर छाडेर हिड्न बाध्य छन् । यौन दुव्र्यवहारको सिकार भएका छन् । श्रम शोषणमा परेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि लागू भएपछिका २५ वर्षको दौरानमा बालअधिकारको पक्षमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाट ग्रहण गर्नै पर्दछ । अबको आवश्यकताघरेलु बालश्रमलगायत सबै प्रकारका बालश्रमहरू मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक संरचनासँग गाँसिएको सवाल भएकोले यसको समूल रूपमा अन्त्यका लागि मुख्य रूपमा देहाय अनुसारको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ः–१) सरकारका तर्फबाट अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।२) अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिका प्रतिको दायित्व अनुभव गराउन व्यापक रूपमा चेतना अभिवृद्धि तथा जागरण अभियान सञ्चालन गरिनु पर्छ ।३) दुर्गम ठाउँमा विद्यालयहरू (खासगरी प्राथमिक) गाउँ नजिक रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ । ४) अभिभावकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न राज्यले रोजगारी वा आयमूलक व्यवसायका लागि निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । ५. भूमिहीन तथा गरिब किसानहरूको आजीविकाको आधारका लागि खेती गर्ने भूमि उपलब्ध गराइनु पर्छ । यसका लागि प्रगतिशील भूमिसुधार गरी ठूला भूमिपतिहरूबाट भूमि अधिग्रहण गरेर वितरणको व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक देखिन्छ ।६) सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ र यसका लागि वार्षिक बजेट नै छुट्याउनु पर्छ । नयाँ योजना निर्माण, भएका कानुनको कार्यान्वयन कढाइका साथ गर्नुपर्छ । ७) स्थानीय निकायले पनि बालविकासका लागि प्राथमिकतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । ८) सरकारीस्तरबाट अनुगमन निरन्तर र प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षविगत २० वर्षदेखि बालश्रम तथा बालअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको सिविसले अहिले पनि निकृष्ठ र जोखिम अवस्थामा काम गरिरहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि गतिविधिहरू सञ्चालन गरी नै रहेको छ । यसरी बालबालिकाको संरक्षण, विकास तथा सहभागिताको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने दौरानमा सिविसले विभिन्न प्रकारका जोखिम र कठिनाइहरूको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । यतिमात्र होइन यसले पटक पटक बालबालिकाको अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको धम्कीहरूको समेत सामना गर्दै आएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग पौँठेजोरी खेल्न अभ्यस्त बनिसकेको यो संस्थाले आउँदा दिनहरूमा आउन सक्ने व्यवधानहरूलाई पन्छाउँदै यस अभियानलाई निरन्तरता दिइरहनेछ । यसको साथै जबसम्म देशमा बालअधिकार प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म आफ्नो कर्तव्य पथबाट विचलित नभई निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहने कुरामा सिविस प्रतिबद्ध छ । Written by शान्ति अधिकारी on Wednesday, 24 February 2016. Posted in Development of Child Rights Tweet
शान्ति अधिकारी Leaveacomment